ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၅-၂၀၁၂ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၅-၂၀၁၂ - ညပိုင်း)
- မြန်မာပြည် မုန်တိုင်း သတိပေးချက် ထွက်ပေါ် click
- မြန်မာပြည်ကို မုန်တိုင်းတိုက်နိုင်ခြေရှိနေ click
- မုန်တိုင်းအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးထွန်းလွင်ကို မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- SSA တောင်ကုန်း အစိုးရတပ် သိမ်း click
- စခန်း ၅ ခု စလုံးမှ RCSS တပ်များ ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ click
- တပ်မတော်က အပစ်ရပ် ရှမ်းတပ်စခန်းကို သိမ်းပိုက်၊ ဒုက္ခသည် ထောင်ချီ ထွက်ပြေး click
- ဦးဘရန်ရှောင်၏ ဖြောင့်ချက်ယူသူအား စစ်ဆေးရန် တင်ပြချက် ထပ်မံ ပယ်ချခံရ click
- လနားဇွပ်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သောက်သုံးရေ ခက်ခဲနေ click
- ဖားကန့်နယ်မှ မီးဘေးဒုက္ခသည်များ နေအိမ်ပြန်ဆောက်ရန် အကူအညီ လို click
- ဖားကန့်၌ အလုပ်လာရှာသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ပြန်ပို့ခံရ click
- အမိမြေ အခြေချရေး ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အသင့်ဖြစ်နေ click
- ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသော ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လယ်မြေများပေါ်တွင် မိုးရာသီ၌ စပါးစိုက်မည် click
- ဂရိတ်ဝေါ ဦးတင်မောင်ကို သမ္မတ ဆုပေးမှု လယ်သမားများ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်မည် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအား အစိုးရအနေဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ရန် လို click
- စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ၂၄ နာရီ မီးဖြတ် click
- မီးဖြတ်တောက်မည်ဆိုပါက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကြေညာပေးရန်လို click
- ပျက်စီးသွားသော ပညာရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ပြီး၊ အနာဂတ် အခက်ခဲများကို ဖြေရှင်းရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပြင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေး click
- အစ္စလာမ်အဖွဲ့ချုပ်နှင့် သူရရွှေးမန်း တွေ့ဆုံ click
- နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ အမြတ်ထွက် click
- သရက်ချောင်းမြို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း တာဝန်လွှဲပေးပါ (ပေးစာ) click
- အပြောင်းအလဲကတော့ ဖိနှိပ်တဲ့ နည်းနာ (ဆောင်းပါး) click
- တရုတ်-မြန်မာ-အမေရိကန် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆက်ဆံရေး (သူ့အတွေးသူ့အမြင်) click
- အမ်အေအိုင် လေကြောင်းလိုင်း ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ပြေးဆွဲမည် click
- လှိုင်သာယာ-စဉ့်အိုးတန်း ပြေးဆွဲသည့် ခေါက်တိုရေယာဉ် FMI Flotilla မှ ဌားရမ်းပြေးဆွဲမည် click
- ဒေါ်လာ သန်း ၅ဝ ကုန်မယ့် ဟိုတယ်ကို ထူးကုမ္ပဏီနဲ့ ထိုင်း SSI တို့ ပူးတွဲတည်ဆောက်မည် (ရုပ်သံ) click
- နိုင်ငံတကာ ကားကုမ္ပဏီများ၏ အရောင်းပြခန်းများ ဖွင့်ခွင့်ပြု click
- အစိုးရထုတ် ငွေတိုက်စာချုပ် အ၀ယ်လိုက် click
- အခေါက်ရွှေ တရက် ၅ ပိဿာနှုန်းဖြင့် ပုံမှန် အရောင်းအဝယ်သာ ရှိနေ click
- ကက်ဆီကွန်ဘဏ် ATM စက်များကို သုံး၍ ထိုင်းမှ မြန်မာသို့ ငွေလွှဲနိုင်တော့မည် click
- အစိုးရ၏ ဥပဒေပိုင်းနှင့် ပေါ်လစီအား မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်က စိုက်ပျိုးရေးတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ရောက်နိုင် click
- တရုတ် ကြက်ဘဲများ မှောင်ခိုတင်သွင်းမှု တုပ်ကွေး ပြန့်ပွားနိုင် click
- ထိုင်းငံပြာရည် စားသုံးရန် စံချိန်မမီကြောင်း တွေ့ရှိ click
- အိန္ဒိယတွင် လိုင်စင် အသိမ်းခံရသော Johnson ကလေးပေါင်ဒါများ မြန်မာ FDA က စစ်ဆေးမည် click
- အကြွေးစနစ်ဖြင့် လည်ပတ်နေရ၍ အထည်ဆိုင်အချို့ ဆက်ရပ်တည်နိုင်ရန် ခက်ခဲနေ click
- နံ့သာမြိုင် အနာကြီးရောဂါသည်စခန်းက စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင် ဦးဖာ (ဆောင်းပါး) click
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပြပွဲ တတိယအကြိမ် ကျင်းပမည် click
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းပြပွဲတွင် အလုပ်ရှာဖွေသော လူငယ်များကို သင်တန်းပေးမည် click
- ကလေးတွေကို အဓမ္မပြုကျင့်မှု မုဒိမ်းမှုအပြင် ကလေးသူငယ်ကို ထိပါးမှုနဲ့ပါ အရေးယူစေချင်ဟု မိဘပြော (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် ဥပဒေပေါင်း ၂၉၀ ကျော် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီ click
- ဘကကျောင်းများအတွက် ကျပ်သန်း ၃၀၀၀ အစိုးရ ထောက်ပံ့မည် click
- EPS – TOPIK စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ ၈,၀၀၀ ကျော်ရှိ click
- ကရင်စာပေ တိုးတက်ပြန့်ပွားရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းအားပေးကြပါရန် click
- ဘုရင့်ညီနောင်ဂူ ဘုရားဖူးများ နေ့စဉ် လာရောက်လည်ပတ် click
- ငွေဆောင်ဒေသကို ဆီးဂိမ်းအမီ လျှပ်စစ်မီး ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ဆို click
- မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ရွက်လှေအဖွဲ့ နယ်သာလန်နှင့် အီတလီနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ click
- ရိုးရာအားကစားဖြင့် ကမ္ဘာကို မလွှမ်းနိုင် click
- ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှု အဆုံးသတ် click
- ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲ အွန်လိုင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ (အသံ) click
- ဖာဂူဆန်ရဲ့ နေရာကို ဆက်ခံမယ့် ဒေးဗစ်မိုးယက်စ် click
အမြင်မတော် လို. ပြောပါရစေ ................
အမတ်များကိုထောက်ပံ့ရန် စဉ်းစားနေကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦးဆို
တစ်လလျှင် ချီးမြှင့်ငွေ ကျပ်သုံးသိန်းသာ ရရှိသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များကို ရုံးခန်း၊ ကားနှင့် ဖုန်းကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးရန် စဉ်းစားနေကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်တို့က ပြောကြား သည်။
... 5/10/13 4:13 PM .. သစ်ထူးလွင် ... မှ
.. လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ ... ကျပ်သုံးသိန်း
အပြင် တခြားခံစားခွင်. နဲ.အခွင်.အရေး တွေ ရတာ
လူတိုင်း သိကြတာပါ ၊
.. လစာလေး မဖြစ်စလောက်နဲ.
ချို.ငဲ.တဲ. ၀န်ထမ်းပြည်သူတွေ လည်း ပါးစပ်ပေါက် နဲ.
ရေ မြင်.မှ ကြာ တင်.မှာပါ ။
.. ဒါ.ကြောင်. (လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ) .. ဆိုတဲ. ( ကြာပန်း) တင်.ချင်ရင် (ပြည်သူများ) ဆိုတဲ.
( ရေ ) ကို မြင်.အောင်အရင် လုပ်ပေးသင်.ပါတယ် ။
Pili Thwun said...
ဆိတ်ဖွားရှာပုံတော်ဖွင့်ရာမှာ လျှို့ဝှက်အတွင်းရေးများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ ရုံးခန်းလေးနဲ့မှ တင့်တယ် အဆင်ပြေမှာပ--
ဖယ်ရီစီးနေရတာ ရာဇအိန်ဒယေ ထိခိုက်သလို ပင်ပမ်းပြီး ငိုက်လေတော့ ကားလေးနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပ--
ဘူးလက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီဆောင်ရွက်ရမှာမို့ ဖုန်းလေးနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပ-
ခမြာ တိုင်းပြုပြည်ပြု အလုပ်တွေ နားချိန်မရှိအောင်ကို အလုပ်များရတဲ့ကြား ခုံရုံးကလည်းတမှောင့်-
အရေးတကြီးကိစ္စရပ်တွေကို ကိုယ်ကျိုးမဖက် အားတက်သရော အနစ်နာခံ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဆောင်ရွက်နေရရှာတဲ့ ပြည်သူစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားတော်မူတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများအတွက် အရေးတကြီးလိုအပ်လျှက်ရှိပါသော ဖုန်း-ကား-ရုံး အစရှိသော ဖက်စလတီများအတွက် ပြည်သူအပေါင်းက သဒ္ဓါညွတ်ပြောင်း ပီတိအဟုန် သွန်းလောင်းလျက် ရှိပါကြောင်း--